पुष्प व्यापारमा हौसिँदै महिला – Saurahaonline.com
चितवन, कात्तिक १४ ।
कति चाहिएको नी?
थुङ्गाको कति पर्छ?
भरतपुर¬–९ शरदपुर वेंडिचोकमा गंगा सापकोटाको सयपत्री फूलको खेती छ । एक हजार तीन सय विरुवा लगेर एक कट्ठा क्षेत्रफलमा उनले सयपत्री लगाइन्। अहिले सयपत्री यहाँ लहलह भएका छन् । भारतीय सयपत्री फूललाई माथ गर्ने उत्पादन छ । थुङ्गा पनि असाध्यै राम्रा र आकर्षक छन् । उनले पोहोर लगाएको भन्दा दोब्बर फूल खेती गरेकी छन्।
यतिखेर माला उनेर बिक्री गर्नमा उनी व्यस्त छन्। परिवार नै यसमा लागेका छन् । ‘अहिले एउटा मालाको मूल्य एक सय छ,’ गंगाले भनिन्, एकसय जति माला बेचिसकें । अझै बिक्री हुने क्रम जारी छ ।’ एक कठ्ठामा लगाएको मालाबाट यो तिहारमा ३०÷४० हजार रुपैयाँ कमाउने योजना उनको छ ।
भरतपुरमा रहेको प्रभात दिदीबहिनी सहकारीबाट यसपालि मालाको विरुवा निःशुल्क पाएपछि उनको लागत पनि घटेको छ । उनीजस्तै राधा भूसाल, विमला विक, मेनका पण्डितले पनि एक कठ्ठा जमिनमा नै सयपत्री फूलको खेती गरेकी छन्। उनीहरुलाई पनि विरुवा निःशुल्क उपलब्ध भएको थियो ।
विगतमा तत्कालीन दिदिबहिनी सहकारीले न्यून मूल्यमा सयपत्री दिन्थ्यो । अहिले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपाल चितवन समन्वय समितिले निःशुल्क बिरुवा दिएको हो । सयपत्री उत्पादन गर्नुभएकी राधा भूसाल पनि अहिले फूल टिप्न मै व्यस्त छन्।
भाँचिने डरले उनले अरुलाई फूल टिप्न दिन्नन्। ‘एक थुङ्गा फूलको ३ रुपैयाँ पर्छ,’ राधाले भनिन्, ‘चार हजार रुपैयाँभन्दा बढीको बिक्री भैसक्यो, माग आइरा’छ ।’
राम्ररी लगाउन सकिए फूलखेती राम्रो हुने देखिएको राधा बताउनुहुन्छ । बजार राम्रो पाए फूल खेतीबाट दिदीबहिनीले राम्रो कमाउन सक्छन् भन्ने यहाँ देखिएको सहकारीकी उपाध्यक्ष नीता वाग्ले बताउछिन्।
‘विस्तारै महिलाहरु व्यावसायिक खेतीमा लाग्न थालेका छन्,’ वाग्लेले भनिन्, ‘यो पटकको बजार हेरेर अर्को वर्ष सहकारीमार्फत नै फूल खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने योजना छ ।’
त्यसमा अधिकाँश महिला छन् । चालीस हजार विरुवा जिल्लामा लगाइएको छ । ‘राम्रो उत्पादन भए सयपत्री फूलले जिल्लाको माग धान्छ,’ समितिका अध्यक्ष प्रकाश पन्तले भने। यसअघि जिल्लामा व्यावसायिक खेती कमै भएपनि यस पटक राम्रो रहेको उनी बताउँछन्।
यो वर्ष पहिलो पटक भरतपुर ११ की मेनका पण्डितले ७०० सयपत्रीका बिरुवा लगेर रोपिन्। अहिले उनले नसोचेको उत्पादन भएको छ । बजार उनलाई थाहा छैन । सौखमा फूल लगाएकी पण्डित भन्छिन्, ‘धेरै ठाउँबाट माग आउन थालेको छ । यो पटक राम्रो व्यापार भयो भने अर्को वर्ष २÷३ कट्ठामै लगाउने सोच बनाएकी छु ।’ खेर गएको जमिनमा यहाँका महिलाले फूलखेती गरेका छन् ।
जिल्ल्लामा करिव ४ मेट्रिक टन फूल उत्पादन हुने गर्छ । यसमा सयपत्री न्यून छ । कृषि विकास कार्यालय चितवनका बागवानी विकास अधिकृत तथा पुष्प खेती हेर्ने विज्ञ धनबहादुर थापा चितवनमा गर्न सके फूलखेती राम्रो हुने बताउछन्। यस जिल्लामा अन्य फूलको समेत उत्पादन राम्रो छ ।
‘बजार खोज्नदेखि लगाउनसम्म सहकारीले सहयोग गर्छ,’ प्रभात दिदीबहिनी सहकारीका सल्लाहकार डा कल्याणी मिश्र भन्छन्। महिलाको आत्मविश्वास समेत बढाउन सहयोग गर्ने भएकाले आम महिलाको छहारी सहकारी भएको उनी बताउछन्।
नेपालमै महिलाद्वारा सञ्चालित प्रभात दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारीले उत्कृष्ट ठहरिएर पुरस्कार समेत पाइसकेको छ । यसमा तीन हजार दुई सयभन्दा बढी महिना सदस्य भैसकेका छन् र पुँजी झण्डै १५ करोड पुगिसकेको छ ।रासस